နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၁၅) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on December 4, 2014 at 13:28 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီနေ့ အပိုင်း (၁၅) မှာတော့ လမ်းကြောင်း (direction) မေးရာမှာ သုံးနိုင်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Marilyn : Excuse me. Could you tell me which way Dobson’s bookstore is?
Nancy : Yes, it’s that way. You go two blocks, then turn left. It's on the corner opposite the post office.
Marilyn : Thanks. I've only been in townafew days, so I really don't know my way around yet.
Nancy : Oh, I know how you feel. We moved hereayear ago, and I still don't know where everything is.
အပေါ်က dialogue မှာ direction မေးတဲ့အခါ ပြောဆိုသုံးနှုန်းပုံ တွေကို လေ့လာရပါမယ်။ အင်္ဂလိပ် စကားပြောမှာ indirect question မေးခွန်းတွေ ထည့်ပြောတဲ့အခါ မေးခွန်းပုံစံ မဟုတ်ဘဲ စာကြောင်းပုံစံ နဲ့ပြောရတာ ဒီစကားပြောမှာ သတိပြုမိကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
'Can you tell me…?' နဲ့အတူတူပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်နဲ့မသိတဲ့ သူတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ 'Could you…' လို့သုံးတာ ပိုယဉ်ကျေးပါတယ်။
…which way Dobson’s bookstore is
Indirect Question မှာ subject က verb အရင်လာတယ် direct question မှာတော့ verb က subject အရှေ့မှာ သုံးရပါတယ်။
Could you tell me which way Dobson’s bookstore is?
(Donson's bookstore =sub / is =verb)
Which way is Dobson’s bookstore?
အလွယ်မှတ်ရရင် စာကြောင်း တစ်ခုမှာ မေခွန်း နှစ်ခု ပါနေရင် နောက်က မေးခွန်းဟာ indirect ဖြစ်တဲ့ အတွက် sub + verb နဲ့ ရေးရ ပြောရတယ်နော်။
Q1. Could you tell me? + Q2. Which way is Dobson's bookstore? = Could you tell me which way Dobson’s bookstore is?
Compound noun ဖြစ်တဲ့အတွက် principal stress ကို ပဌမ စာလုံး ပေါ်မှာ ထည့်ရပါတယ်။
I… don't know my way around ဆိုတာ I don't know how to find things တို့ I don't know how to go to various places. တို့နဲ့အဓိပ္ပါယ် ဆင်တူတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသုံးတော့ ကွဲပြားတယ်။
ဒီမှာလည်း indirect question ဖြစ်တဲ့ (how you feel) က direct question ဖြစ်တဲ့ (how do you feel?) နဲ့ကွာခြားပုံကိုသတိပြုပါ။ ဒီအသုံးမှာ မေးခွန်းအစား စာကြောင်းပုံစံနဲ့ သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် sub + V order နဲ့ရေးတယ်၊ ပြောတယ်။
I don't know where everything is.
ဒီမှာလည်း "where everything is" က indirect question ဖြစ်ပါတယ်။
I don’t know. Where is everything? (Statement + Question) = I don't know where everything is. (indirect question)
Business English ဆရာ များအတွက် အကြံကောင်း ၅ ချက်
လေသံစစ်စစ်နဲ့ စကားပြောခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်
ခက်ခဲသော အင်တာဗျူးမေးခွန်းများကို ဖြေရန် ချက်ချာပါးနပ်သော အဖြေ (၃၀)...